Beer cagaaran | February 2020
Tilmaanta iyo astaamaha ee caanaha u-u adkaysta dhaxan-ultra-hore u of yaanyo "Sanka"
Tamaandhada: Waa maxay isticmaalka iyo ma jiraa waxyeelo caafimaad?
Yaanyo waa khudrado u gaar ah oo raba dadka degaanka badan ee dhulkeena. Cuntooyin badan oo kala duwan ayaa laga diyaariyey, iyo khudaar cusub ayaa loo cuni karaa cunto madaxbanaan. Waa lagama maarmaanka miiska, ma aha oo kaliya xilliga xagaaga, laakiin sidoo kale xilliga qaboobaha-guga, marka alaabooyinka yar yar iyo kuwa yaryarba ay u jilcaan jirkeena leh fitamiino iyo walxo faa'iido leh.
Waxaan u daweynaa cudurrada caadiga ah ee qajaarka on windowsill (leh sawir)
Guryaha xagaaga iyo kuwa jecel oo kaliya ayaa waxay noqdeen kuwo la yaab leh si ay u koraan qajaarka iyo khudaarta kale ee guriga. Sidaa darteed, dhirtaadu waxay had iyo jeer ku jiri doonaan isha lagu hayo, oo waxay ku raaxaystaan ​​goosashada. Si kastaba ha noqotee, xitaa dalagyada koray ee guriga ayaa u nugul cudurka. Waxaa muhiim ah in si faahfaahsan looga ogaado cudurrada qajaarka marka koraan daaqadaha iyo dhibaatooyinka soo ifbaxaya, sawirku wuxuu kuu sheegi doonaa inaad cadowga u sheegto qof ahaan.
Sida loo koro qajaar ah "Nezhinsky": Faa'iidooyinka Fikradaha
Cucumber "Nezhinsky" ayaa markii ugu horeysay u muuqday magaalada Nezhin (Ukraine), halkan magaciisa. Muddo dheer, waxaa loo tixgeliyey mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan sababtoo ah dhadhankiisa iyo kaydinta muddada fog ee brine. Maanta, sababtoo ah muuqaalka tiro badan oo kala duwan oo kala duwan iyo Beelaha, waa wax yar illowday, laakiin si aan micne lahayn.
Sidee loo daweeyaa qajaarka cudurada iyo cayayaanka: daawooyinka dadweynaha
Markuu go'aansaday in uu koro qajaarka, ma ahan mid muhiim u ah naftiisa ama iibka, waxaa muhiim ah in la xasuusto in ay ka fiican tahay ka hortagga dhibaatooyinka marka loo eego cawaaqibka. Aqoonta shuruucda tiknoolajiyada beeraha iyo daaweynta saxda ah ee qajaarka ee cudurrada daawooyinka dadku waxay caawin doonaan xitaa bannaanka u ah si ay u helaan dalagga loo baahan yahay.
Sababta iyo sababta ay u qaadanayaan caleemaha qajaar
Marka qajaarka sii kordhaya, bannaanka u badani la kulmaan su'aasha ah in la qaado caleemaha qajaar iyo qaadashada shaar jaranjarada. Aan aragno si dhow u eeg su'aashan. Maxay u sameeyaan? Markaad daryeesho qajaarka, fiisooyinka badani waxay ku talinayaan in ay ka soo baxaan ama jaraan caleemaha. Nidaamkan waxaa loo sameeyaa: hagaajinta hawada; ka hortag kallor rootaha; si fiican u iftiiminaya dhirta; kordhiyaan dhalidda khudaarta; abuuritaanka saxda ah ee dhirta; saarista caleemaha buka, caajis iyo caleemo qallalan; xayirista ubaxyada qashinka ah.
Marka xagaagu noqdo mid qabow iyo roobab badan, dadka deggan xagaaaga xagaaga ayaa ka welwelaya su'aasha: sida looga ilaaliyo sariirahooda iyaga oo qajaarka ka soo cayayaanka sida cayayaanka budada ah. Tani waa fayruus caadi ah, kaas oo, nasiib daro, bannaanka u badan waa inay la dagaalamaan. Maqaalkeena waxaan si faahfaahsan u fiirin doonaa xashiishada budada ah, sababta ay u muuqato qajaarka iyo tallaabooyinka jira ee la dagaallama.
Sidee loola tacaali karaa xayrta budada ah ee yaanyada
Dhuxul macaan (ama ash) waa cudur fungal ah oo saameeya dalagyada dhirta intooda badan, iyo yaanyada ma aha mid ka reeban. Maqaalkani waxa aanu baran doonaa sida xagta udugga budada u egyahay yaanyada iyo sida loola macaamilo. Waa maxay khatarta iyo meesha Qaadku ka yimaado waa halis sababtoo ah waxay ka qaadataa nafaqooyinka dhirta, farageliya hababka sawir-ficinta, neefsashada, ka dhigaysa yaanyo yaanyo aan xasilloonayn xittaa ilaa dabacsan qabow.
Sidee loo sameeyaa jilbaha si loo siiyo
Dalagga beeraha ee ku yaalla goobaha beeraha ayaa badanaa ku dhufta shimbiraha ku nool meel u dhow. Shimbiraha, xayawaanka ama roogga - shimbiraha, duulaya adhiga, waxay awoodaan in ay si buuxda u qaataan midhaha geedka hal geed dhowr saacadood gudahood. Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, cirifka beerta wuxuu u yimaadaa si uu u ilaaliyo bannaanka ka soo ciriiriga cawska.
Waa maxay sababta caleemaha u cagaaran ee yaanyada ee lagu koriyo ah, waxa la sameeyo in kiiskan
Xitaa bannaanka u khibrad leh ayaa la kulmi kara buuq sida caleemaha yellowed ee yaanyada ee lagu koriyo ah. Sababaha tani waa mid gebi ahaanba ka duwan. Waa arrin aad muhiim u ah in la ogaado halka laga soo xigtey ee dhibaatada wakhtiga si loo helo xal isla markaana u saamaxdo tamaandhada inay koraan oo horumariyaan. Aan aragno sababta caleemaha yaanyada lagu beeray aqalka dhirta lagu koriyo oo jaale noqonaayo iyo qeexaan xalalka suurtagalka ah ee dhibaatadan.
Sida loo daweeyo qajaarka ee lagu koriyo ah
Bannaanka ayaa inta badan waa in ay la tacaalaan xaqiiqda ah in ay qajaarka aqalka dhirta, taas oo ay u qaddariyaan, saameynaya cudurada iyo cayayaanka. Xaaladda, oo la abuuray gudaha gudaha, waxay gacan ka geystaan ​​horumarinta ballaaran ee cudurrada kala duwan. Dagaalka ka dhanka ah dhibaatooyinkan waa qayb muhiim u ah daryeelka ee dalagyada khudradda.
Koraaya yaanyada cherry maanta ayaa noqday waxqabad caan ah. Laakiin sida loo koro yaanyada cherry at guriga on windowsill iyo heli goosashada miro, ma qof kasta ogyahay. Macluumaadka ku saabsan beerashada iyo daryeel dheeraad ah mucjiso yar yar ayaa lagu soo bandhigay maqaalkan. Waa maxay noocyadda yaanyada cherry ku haboon yihiin koritaanka on windowsill Si loo daryeelo dhirta ku habboon, iyo baadiyaha ma ku xanuunsado ka maqan la'aanta ah, waa inaad doorataa noocyo yar yar sii kordhaya.
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beeray qajaarka geedo
Beerista qudaarta oo dhan waxay ku bilaabataa beerto, sidaa daraadeed waa muhiim in la ogaado dhammaan arin-galinta habkan. Ogaanshaha goorta iyo sida loo beero yaanyada ama qajaarka geedo, waxaad si ammaan ah u tirin kartaa goosashada deeqsinimo xilliga dayrta. Aan aragno arrintan si aad u dhow. Waxa loo baahan yahay beeritaanka Marka lagu daro abuurka qajaar, waxaad kaloo u baahan doontaa waxyaabo kale oo beerto: karti, habka ciidda saxda ah iyo xaaladaha cimilada ee ku habboon.
Dhamaan wixii ku saabsan qajaarka qajaarka: talooyinka ugu fiican
Qajaarada daaqa waa nidaam lagama maarmaanka u ah helitaanka wax-soo-saarka wanaagsan. Xayawaanku waxay kuugu yeeraan laanta dhinacyada geedka, iyagoo nuugaya nafaqooyinka aasaasiga ah, taas oo, lafteeda, lumiso xoogeeda waxayna keenaysaa midho yar. Ka qaadista tallaabooyinka qajaarka ah waxay keenaysaa soo saarida walxaha muhiimka ah ee laanta ugu muhiimsan iyo helitaanka goosashada qani ku ah.
Asaasiga ah ee yaanyada sii kordhaya ee lagu koriyo
Haddii aad leedahay hudheel xagaaga kuu gaar ah, markaa su'aasha ah koritaanka dalagyada beeraha ee kala duwan ayaan kugu kicin karin. Dhibaatada ugu weyni waxay tahay inta badan xulashada meel gaar ah ee koritaanka qajaarka ama yaanyada la mid ah, sababtoo ah waxaad ku kori kartaa labadaba dhul furan (beerta) iyo aqalka dhirta polycarbonate.
Waa maxay sababta qajaarka boric acid
Si aad u hesho dalagyo dhir ah oo hodan ah waxay u baahan yihiin inay siiyaan macdanaha lagama maarmaanka ah waqtigooda. Laakiin maanta, dadku ma awoodi karaan inay iibsadaan Bacriminta adag ee la diyaariyo, taas oo ah sababta aan u xusuusto wax ku saabsan raqiis, waqti dheer, laakiin la illoobay daroogooyinka. Iyo mid ka mid ah waa boric acid.
Lukhovitsy qajaar: sida loo koro iyo waa maxay faa'iidooyinka
Qajaarka Lukhovitsky aad bay u qiimeeyeen bannaanka, sababtoo ah waxay leeyihiin dhadhan aad u fiican, muuqaal wacan iyo waxay ku habboon yihiin isticmaalka labadaba cusub iyo caanaha. Inkasta oo noocyada noocan ah ay koraan xaalado gaar ah, waxaad sidoo kale isku dayi kartaa inaad tan guriga ku sameyso. In article waxaan ka fekereynaa sida loo abaabulo xaaladaha lagama maarmaanka ah ee qajaar Lukkovitsky si aad u hesho goosashada fiican, iyo sidoo kale sharaxaad ka mid ah noocyada ugu caansan.
Sida loo helo dalag weyn oo qajaarka ah: noocyo badan oo miro leh
Cucumber waxaa had iyo jeer ku jirtaa cuntada aadanaha. Tani waa mid ka mid ah khudradda ugu caansan ee waddamada post-Soviet-ka. Ka dib oo dhan, waa wax aan qabyo ahayn oo keena ma aha oo kaliya goosashada, laakiin sidoo kale faa'iido dhaqaale in dadka badan oo xagaaga deggan. Greenhouse ama dhulka u furan, had iyo jeer doorashada ee noocyada ugu wanaagsan ee qajaarka. Qajaarka waa la kori karaa labadaba aqalka dhirta lagu koriyo iyo berrin furan - jiinyeerada waxay bixiyaan doorasho ballaaran oo noocyo kala duwan oo miraha ah.
Waxyaalaha waxtarka leh iyo waxyeelada leh ee dabocase madow
Khudaarta ayaa leh fasalka Kabbashka, waxaa loo tixgeliyaa noocyo kala duwan oo rooti ah. Waa noocyadaas aan ku dhicin duurjoogta, oo ka duwan inta soo hartay. Cilmi-baarayaashu waxay aaminsan yihiin in goobaha cagaaran ay yihiin Aasiya. Waxaa lagu koray Europe, North America, Australia iyo Asia. Mashiinka madow wuxuu leeyahay sifooyin faa'iido leh iyo ka hortag, waxaana badanaa loo isticmaalaa sida daaweynta dadka ee daaweynta qufaca.
Faa'iidooyinka iyo xeerarka lagu rakibo shabakadaha trellis ee qajaarka
Qajaarka, sida la og yahay, waa warshad faan iyo beerta u baahan tahay meelo badan oo bilaash ah caleemaha dheer iyo caleemo ballaaran. Dad badan oo ka mid ah dadka degaanka xagaaga waxay bixiyaan lacag la'aan xayawaankooda cagaaran, waxayna ku koraan wadooyinka iyo xitaa sariiraha deriska ah. Laakiin waxa la sameeyo haddii goobta uu yaryahay, laakiin waxaan rabaa in aan kor ugu kaco.
Sidee iyo goorta ay ku beeri geedo of yaanyada ee dhulka u furan
Beerto geedo aqalka dhirta ah ee dhulka u furan waa had iyo jeer dhacdo xiiso leh. Warshad ah oo si qurux badan u koray oo lagu hormariyay gudaha gudaha qumbaha hadda waxay leedahay inay wajahdo isbeddelka heerkulka, suurtagalnimada caabuqa cudurada iyo dulin. Xitaa geedo adag, gawaarida dhulka waa furfurnaan weyn, sidaas darteed, si loo yareeyo, waxaad u baahan tahay inaad raacdo xeerar yar oo fudud.